အတတ်ပညာ ဝါးချောင်း စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |Zhongxing
တခါသုံး ချည်ထည်၊ ဝါးချောင်းဖြင့် ဇီဝပိုးသတ်နိုင်သော ပိုးမွှားများ
SHAOHU@ Cotton Swab သည် သစ်သားချောင်း ၊ ဝါးချောင်း ၊ စက္ကူချောင်း ၊ ပလပ်စတစ်ချောင်း စသည်ဖြင့် ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ပံ့ပိုးပေးသည် .သစ်သားချောင်းကို သဘာဝသစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး nautre မှ ပစ္စည်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ဘေးကင်းပြီး ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေဘဲ ဇီဝရုပ်ကြွင်းကို ဖောက်ဖျက်နိုင်သည် ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဝါးချောင်းများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပစ္စည်းများဖြစ်သောကြောင့် ရေရှည်တည်တံ့သောနည်းလမ်းဖြင့် ရိတ်သိမ်းနိုင်သောကြောင့် ကြီးထွားနှုန်းမြန်ပါသည်။၎င်းသည် ဇီဝပျက်ပြားစေသည့်အပြင် တာဝန်သိစွာ ကုသနိုင်ပါသည်။ ဝါးဝါးများသည် အထိရောက်ဆုံး သဘာဝသန့်စင်မှုထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ခံအားပေးသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ စက္ကူချောင်းသည် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ကွဲထွက်နိုင်ခြေနည်းသည်၊ အသုံးပြုရပို၍ ဘေးကင်းကာ ဇီဝပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပလပ်စတစ်ချောင်းသည် အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ပုံသွင်းနိုင်ပြီး၊ လူများ၏ ကွဲပြားခြားနားမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ လိုအပ်ချက်များ။
SHAOHU@Cotton swab များသည် မတူညီသော ပစ္စည်းများနှင့် ပက်ကေ့ခ်ျအရွယ်အစားဖြင့် ရောက်ရှိလာကြပြီး daliy သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းများ၊ အလှအပ စောင့်ရှောက်မှု၊ လက်မှုပညာ နှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများ အတွက်သာမက ခံတွင်း စောင့်ရှောက်မှု နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု များတွင်လည်း ကောင်းစွာ လုပ်ဆောင် နိုင်ကြပါသည်။ ဂွမ်းပုံး သေးသေးလေး ပါလိမ့်မည် ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ တောက်ပသောအနာဂတ်ကို ခြယ်မှုန်းရန်အတွက် ပျော်ရွှင်စရာလှုပ်ရှားမှုများတွင် သင်နှင့်ကလေးများ ၎င်းတို့အား အတုအယောင်စုတ်တံများအဖြစ် အသုံးပြုခွင့်ပြုပါ။
1. ပစ္စည်း- ဝါး၊ သစ်သား၊ စက္ကူ၊ ပလပ်စတစ်ချောင်း + ချည်ထိပ်ဖျား
2. ချောင်း- အရှည်-75mm(သည်းခံမှု 2cm အလေးချိန်-22g-24g
3. ထိပ်ဖျား အလေးချိန် (100% အရောင်ချွတ်ထားသော ချည်) : ≥35mg
4. ချောင်းကြားရှိ ကပ်တွယ်တွန်းအား : 4.0N ထက်မနည်း။
5.နစ်မြုပ်ချိန်: 10s ထက်မပိုစေရ။
6.Packing: 100% eco-friendly packing
10 နှစ်ကျော်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ ZHONGXING အဖွဲ့သည် Cotton Swabs ထုတ်ကုန်စီးရီးများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လျက်ရှိသည်။
သင်နှင့်အတူ လူသားဖြစ်တည်မှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
တစ်ခါသုံး Cotton Swabs
Cotton Swabs---100pcs သို့မဟုတ် 200pcs biodgradable သေတ္တာ
1. "အခမဲ့နမူနာတောင်းဆိုရန်" တက်ဘ်ကို နှိပ်ပါ။
2. ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။
သင့်တောင်းဆိုချက်အရ နမူနာများ ပေးပို့မည် (အထက်ပါ ထုပ်နှင့် တူညီမည်မဟုတ်ပါ)၊ ပို့ခကုန်ကျစရိတ်ကို သင့်ဘက်မှ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
SHAOHU@ ဝါဂွမ်းတံသည် သစ်သားချောင်း၊ ဝါးချောင်း၊ စက္ကူချောင်း၊ ပလပ်စတစ်ချောင်းစသည်ဖြင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်စရာ အမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အဆိုပါသစ်သားချောင်းကို သဘာဝသစ်သားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး သဘာဝပစ္စည်းများမှ ပြုလုပ်ထားသည်။အသုံးပြုရာတွင် ဘေးကင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေဘဲ ဇီဝရုပ်ကြွင်းများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဝါးတုတ်များသည် ကြီးထွားနှုန်းမြန်သောကြောင့် အသီးအနှံများကို အရှည်မြန်စွာ ရိတ်သိမ်းနိုင်သောကြောင့် ဇီဝဖျက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး တာဝန်သိစွာ ကုသနိုင်သည်။ အထိရောက်ဆုံးသော သဘာဝ သန့်စင်ရေး ထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ခံအားပေးသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ စက္ကူချောင်းများသည် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ကွဲထွက်နိုင်ခြေနည်းပြီး၊ အသုံးပြုရပို၍ ဘေးကင်းကာ ဇီဝရုပ်ကွဲနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာစေပါသည်။ ပလပ်စတစ်ချောင်းများသည် အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ကောင်းစွာ ပုံသွင်းနိုင်ပြီး လူများ၏ မတူညီသော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
SHAOHU@ ဝါဂွမ်းတံများသည် ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့် ထုပ်ပိုးအရွယ်အစားများဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေး၊ အလှအပဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှု၊ လက်မှုပညာနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် စောင့်ရှောက်မှုအတွက်သာမက ခံတွင်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတွင်လည်း ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂွမ်းပုံးသေးသေးလေးတစ်ပုံး ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ တောက်ပသောအနာဂတ်ကို ခြယ်မှုန်းရန်အတွက် ပျော်ရွှင်စရာလှုပ်ရှားမှုများတွင် သင်နှင့်ကလေးများ ၎င်းတို့အား သေးငယ်သောစုတ်တံများအဖြစ် အသုံးပြုခွင့်ပြုပါ။
ဘေးကင်းရေးသတိပေးချက်ချည်ဘူးများကို နားအတွင်း သို့မဟုတ် နှာခေါင်းထဲသို့ နက်နက်နဲနဲ မထည့်သင့်ပါ။ကလေးများနှင့် လက်လှမ်းမမီသော နေရာမှာထားပါ။ မှားယွင်းစွာအသုံးပြုခြင်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်။
Cotton Swabs Gauze Cotton Roll, Cotton Ball, Face Mask, Medical Sheet, Meidcal Cap စသည်တို့
ခေါင်းတစ်လုံး (သို့) နှစ်ထပ် အဝိုင်း
အရည်အသွေးမြင့် Cotton Swab
(ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ အမျိုးမျိုးသော ထုပ်ပိုးမှုရွေးချယ်စရာများကို ပေးဆောင်ပါ။)
75.0 (±1.0 မီလီမီတာ)
15.0 (±2.0 မီလီမီတာ)
ø 5.0 (±0.3mm)
>= 1.5 မီလီမီတာ
ø 2.5 (±0.16 mm) x 70 mm (±0.8 mm)
ယခင်- တခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ချည်ဘောလုံး ပိုးမွှား 100% စစ်မှန်သော ချည်သား .စုပ်ယူနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် စက်ရုံမှ ချည်သားလုံးများ
နောက်တစ်ခု: တစ်ခါသုံး Sterile Fliter Mask Self-suction filter mask
မျက်နှာကဲ့သို့ Mask,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask, Fda ဖြင့် တခါသုံး Mask ၃ လွှာ, တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ, Mask အလုပ်,